Natoo Deggersa Oromiyaa (NDO); Oromia Support Fund (OSF) – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooNatoo Deggersa Oromiyaa (NDO); Oromia Support Fund (OSF)
Akkuma beekkamu ummatin Oromoo hacuucaa fi dhiibbaa hamaa jala jira. Mootummaan nafxanyootaa, kan Abiy Ahmadiin hoogganamuun, lola irratti labasee waraanaa jira. Injifannoolee ummatin Oromoo lafee fi dhiiga ilmaansaani gonfate hunda boodatti deebisee sirna nafaxanyootaa deebisee irratti diriirsuuf carraaqa.
Ummatin keenya garuu, haala boonsaa fi onnachiisaa ta’een, mormachaa fi ofirraa qolachaa jira. Mirgasaa falmachuusaafis gatii guddaa baase. Balleessa tokko malee hoogganootin jaarmotasaa, miseensonni fi deggertootinsaanii, mana hidhaatti guuramu. Ilmaansaa guuyyaa-guyyaatti akka bineensaa adamfamanii ajjeefamu. Hookora fi gara-jabinaa humnoota tika mootummaa nafxanyaootaan qamnisaanii hirrifama. Ilmaan Oromoo qe’eesaaniirraa buqiifamanii biyyasaanii keessatti baqattoota taasifamaanii jiraatu. Humnaan gara waraana kaabaatti guuramaa jiru.
Ummatin keenya garuu, ammallee, gootummaan falmachuu adda hin kutine. Ha ta’u malee, kan seera malee hidhame abokaattoo barbaada. Maatiin qe’eesaarraa buqqa’e hadhaadhiyyoma barbaada. Kanneen mada’aan fi qaaminsaanii hiridhifame waldhaansa barbaadu. Haati ilmishee tokkich ishee gargaaru jala hidhame ykn ajjeefame gargaarsa hin qabddu. Haati ijoollee abbaan manaa irraa hidhame ykn ajjeeffame tinnisa hin qabdu. Kan mana fi uyruu irratti gubban tumsa hin qabu. Dararmin ummata keenyaa mootummoota dhihaa fi idil-addunyaatti biratti ilaalcha gahaa argachaa hin jiru.
Gabaabaatti, qaawaa guddatu jira. Qaawwaa kana cufuun ummata keenyaaf gaaffii du’a fi jireenyaa ti! Ilmaansaa biyya ambaa jirruuf ammo waamicha lammummaati! Mirgasaa falamachuun itti fufee diina ofirraa qulachuuf, akka ummataatti danadamachuuf, ummatin keenya deggersa qabatamaa barbaada. Hanqina qabeenyaa irraan kan ka’e, gargaarsa barabaachisu kana argachaa hin jiru.
Hata’u malee, sochiin qaawwa kana cufuuf biyya ambaatti godhamaa jiru gahaas, qindaawaas miti! Kanaaf, Waltajjiin Marii Oromo Idil-addnyaa (WMOI-A) ykn Oromia Global Forum (OGF), akka agoobara “Jaarmota Oromoo kana Hawaasaa, kan Oogummaa, kan Amantaa fi kkf” tti, balaa ummata keenya irratti aggaammatamee jiru kana qolachuu keessatti dirqamasaa bahuuf:
Natoo Deggersa Oromiyaa (NDO), bu’ureessee jira.
Gargaarsi funaanamu hundi NDO tti erga galee booda.
Abboottiii amaanaan (trustees) bakka fi dhimma gargaarsi barbaachisu hundaaf hirama.
WMOI-An, abbootii amaaanaa ramaduu, qajeelfama fi sirna herrega horro barbaachisu baasurratti hojjechaa jira.
Maalaqqa funaaname kana dhimmoota asiin gadiirra oolcha:
Hidhamtoota siyaasa Oromoof abokaattoo dhaabuu fi hoogantootin mootummaa nafaxanyootaa gaafatama jalaa akka hin baanee gochuuf;
Maatii qe’eesaarraa buqqa’e hadhaadhiyyoomuu;
Oromoota osoo mirga ummatasaanii falmanii mada’aan fi qaaminsaanii hiridhifame waldhaansisa;
Maatii abbaan warraa, osoo mirga ummatasaa falmuu irraa hidhame ykn ajjeeffame ittiin tinnisa;
Oromoota mirgasaaniif falmachuusaaniif ooyruu fi mana irratti guban ittiin gargaara;
Dararma ummata keenyaa mootummoota dhihaa fi idil-addunyaatti biratti ilaalcha gahaa akka argatu ittiin hojjeta;
Dhimmoota hatattamaan gargaaramu qaban addaddaarrati oolcha
Ilmaan Oromoo hundi waamicha lammummaa kanaaf deebii gahaa, akka asiin gadiitti, akka kennan WMOI-A kabaja wajjin isaan yaadachiisa.
WMOI-A bara 2021 keessa $1,000,000.00 finnnanuuf saganteeffatee jira;
WMOI-A, Mudee 19, 2020 sa’aa 11:00 WD (PM) – 3:00 WB (PM) akka yeroo Washington DC tti, akka armaan gadiitti gargaarasa funaanuuf qopaa’aa jira.
GoFundMe sa’aa 3:00 WB jalqaba. Sa’aa 3:00WB jalqabe ilmaan Oromoo hundi akka gumaacha maallaqaa godhan gaafanna;
OGF, fuulaa FaceBook isaa irratti, dhaadhessa fi “update” gargaarsaa funaanuu geggeessa; Duukaa bu’aa. Fuula Facebook OGF irraa fuudhuun, fuula FaceBook keessan irratti nuuf dabarsaa.
Adjenda in PDF download